ICU मा ग’म्भी’र अवस्थामा भर्ना मनोज गजुरेललाई सम्झिदै उनकी पुर्व पत्नी मिनाले लेखिन भावुक हुँदै यस्तो स्टाटस ! – AB Sansar
ICU मा ग’म्भी’र अवस्थामा भर्ना मनोज गजुरेललाई सम्झिदै उनकी पुर्व पत्नी मिनाले लेखिन भावुक हुँदै यस्तो स्टाटस !
November 6, 2020 adminLeaveaComment on ICU मा ग’म्भी’र अवस्थामा भर्ना मनोज गजुरेललाई सम्झिदै उनकी पुर्व पत्नी मिनाले लेखिन भावुक हुँदै यस्तो स्टाटस !
काठमाडौ । चर्चित हाँस्य कलाकार मनोज गजुरेललाई दशैंको दिन (कात्तिक १० गते) कोरोना भा इ रस पुष्टि भएको थियो । उनी कोरोना पुष्टि भएपछि होम आ इ सोलेसनमै बसेको बेलामा स्वास्थ्यमा अ चा नक स मस्या आएपछि अस्पताल भर्ना गरिएका छन् । उनको स्वास्थ्य अवस्था ग म्भि र भएकाले आ इसियुमा राखेर उपचार सुरु गरिएको छ । ****यो समाचार को पुरा भिडियो हेर्न तल क्लिक गर्नुहोला****
स्वास्थ्य अवस्थामा ग म्भी र समस्या देखिएपछि बुधबार बलम्बुस्थित सशस्त्र प्रहरीको अस्पताल भर्ना गरिएका उनको स्वास्थ्यमा सुधार आएको छैन । थप समस्या भएपछि उनलाई आ इ सि युमा राखिएको छ । पूर्वपती मनोजको स्वास्थ्यमा समस्या आएको खबर पाएकी उनकी पूर्वपत्नी मीना ढकालले दुख ब्यक्त गरेकी छन् ।
उनले गजुरेलको स्वास्थ्य लाभको कामना गरेकी छन् । सामाजिक सञ्जाल फेसवुकमा गजुरेलको स्वास्थ्य अवस्था विग्रिएको बारेमा लेखिएका समाचार शेयर गर्दै उनले छिटै निको होस् भन्दै लेखेकी छन् । २० वर्ष भन्दा लामो वैवाहिक जिवन संगै विताएका मिना र मनोज तीन वर्ष अघि अलग भएका हुन् ।
यी नै हुन सहायक हवल्दार सन्तोष श्रेष्ठ जसले ग’र्भ’व’तीको ज्या’न जोगाउन गरे १० औं पटक र’क्तदान !
May 16, 2021 May 16, 2021 Admin01
भावपुर्ण श्रद्धाञ्जली:भर्खरै बिमान दुर्घटना ११७ जनाको मृ’त्यू पुरा समचार आउँन बाँकी मनमा दया माया भए सेयर गरी आफन्त मा पुर्याइदिनु हुन्छ